राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री देखि दलका २० नेताहरुको शैक्षिक योग्यता कति ? - शैली न्युज
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री देखि दलका २० नेताहरुको शैक्षिक योग्यता कति ?
१७ श्रावण २०७६, शुक्रबार ०८:०३
नेपाली राजनीतिकक्षेत्रका हस्तिहरुको शैक्षिक योग्यताका बिषयमा बिभिन्न अनलाईन सञ्चारमाध्यामको सहयोगमा हामीले एउटा सामाग्री तपाईहरुमाझ प्रश्तुत गर्दैछौ । हेरौं राष्ट्रपति, मन्त्री देखि नेताको शैक्षिक योग्यता कति ?
१.राष्ट्पति विद्यादेवी भण्डारी
राष्ट्पति विद्यादेवी भण्डारीले भोजपुर क्याम्पसबाट आइ.ए सम्मको अध्यायन गर्नु भएको छ । त्यसपछि तत्कालिन माले पार्टीको युवा संगठनमा संलग्न रहेर राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभयो ।
उहाले महेन्द्र मोरंग बहुमुखी क्याम्पसबाट बि.ए सम्मको पढाइ गर्नु भएको छ । उहा गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्पति हो भने जननेता स्व. मदन भण्डारीको धर्मपत्नी हो ।
नन्दकिशोर पुन उपराष्ट्पति । आठ वर्ष उमेरमा विद्यालय जिवन सुरुगरेका पुनले रोल्पाको गाउमा नै कक्षा ३ सम्म अध्ययन गर्नु भयो । त्यसपछी सदरमुकाम लिवाङबाट मावि स्तरको पढाई सकेर एसएलसी चाहि कम्युनिष्ट किल्लाका रुपमा परिचित थवाङको विद्यालयबाट २०४२ सालमा उर्तिण गर्नु भएको हो ।
पुनले राजनीतिशास्त्रमा स्नाकतोर सम्म अध्यान गर्नु भएको छ । यसका साथै उहाले सैन्य दर्शन र राजनीतिक दर्शनको समेत अध्यन गर्नु भएको छ । पुन नेपालको दोस्रो पटक उपराष्ट्पति हुनुहुन्छ ।
३.केपी शर्मा ओली (प्रधानमन्त्री)
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री । उहाले कक्षा १० सम्म अध्यान गर्नु भएको छ । उहाले लामो समय जेल जीवन बिताएको कारण आफ्नो औपचारिक अध्यान अगाडी बढाउन सक्नु भएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत, उत्तराखण्ड राज्यस्थित गोविन्दबल्लभ पन्त कृषि तथा प्रविधि विश्वविद्यालयले २५ चैत्र २०७४ मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरेका थिए ।
उत्तराखण्ड राज्यका गभर्नर एवं विश्वविद्यालयका चान्सलर कृष्णकान्त पलले ‘डाक्टर अफ साइन्स’ को उपाधि प्रदान गरेका हुन् ।ओलीको प्रधानमन्त्री हाल दोश्रो कार्यकाल हो ।
झन्डै १३ वर्ष भुमिगत जीवन बिताएका पुर्व प्रधानमन्त्री एवम नेकपाको अध्यक्ष प्रचण्डले २०२६ चितवनको नारायणी विद्या मन्दिर मा.वि. शिवनगरबाट एस.एल.सी.उत्तीर्ण भई २०२७–२०२९ पाटन बहुमुखी क्याम्पसबाट आई.एस.सी. पूरागरी २०३१–२०३३ सालमा रामपुर कृषि क्याम्पसबाट कृषिमा बि।एस्सी गरेका थिए भने एम.पी.ए.सम्मको अध्ययन गरेका छन ।
प्रचण्डले नारायणी विद्या मन्दिर मा.वि.शिवनगर–२०२९ साल, डण्डा मा.वि.नवलपरासी र भीमोदय मा.वि. आरुघाट, गोरखा–२०३३–०३५ सालमा शिक्षण पेशा पनि गरेका थिए ।
५.माधव कुमार नेपाल
रौतहट जिल्लाको गौरमा जन्मिएका नेपालको ३४ औ प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले गौरको श्री जुद्ध माध्यमिक विद्यालयबाट एस।एल।सी। गरी २०२२ सालमा वीरगंज ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना भएका थिए । नेपाल १३ बर्षको उमेर देखि राजनीतिमा होमिएका थिए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बाणिज्य संकायमा स्नाकतोर गरेका छन । नेपाल मूलधारको राजनीतिमा आउनु भन्दा पहिले नेपालले बैकमा जागिर गर्दथे ।
इलाम जिल्लाको साँखेजुङमा जन्मिएका झलनाथ खानालाने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्र र इतिहासमा स्नातक सम्म पढाइ पुरा गरेका छन। उनले बागलुङ जिल्लाको गल्कोट भन्ने ठाउमा बिज्ञान विषयको शिक्षक पेसामा रहदा राजनीति गरेका कारण जागीर गुमाउन बाध्य भएपछि खनाल पूर्णरूपमा राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतीशास्त्रमा स्नाकतोर र कानुनमा स्नातक सम्मको अध्यान गरेका देउवा पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् । देउवाले लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा रिसर्च फेलो गरेका छन । उनि नेपाल विधार्थी संगठनका प्रथम सभापति एवं सस्थापक हुन् । कांग्रेस सभापति सम्म रहेका देउवा विविन्न कालाखंडमा नेपालको प्रधानमन्त्री भएका छन् ।
पंचायत विरोधी आन्दोलन गरेवापत १३ वर्ष जेल जीवन बिताएका रामचन्द्र पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नाकोत्तर सम्मको अध्यन गरेका छन ।
९.डाक्टर बाबुराम भट्टराई
भट्टराई २०२६ सालको एस.एल.सी परिक्षा दिएका हुन् भने अमृत साइन्स क्याम्पस अस्कलमा आइ. एस. सीमा बोर्ड फस्ट गरे पछी कोलम्बो प्लान छात्रवृत्तिमा आर्किटेक्टलर इन्जिनियरिङ्ग पढ्न २०२९ सालमा भारतको चंदिगढ़ गए । त्यसपछि टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिङ्गमा स्नाकोत्तर गर्न पुनः छात्रवृत्तिमा दिल्ली स्कूल अफ प्लानिङ एण्ड आर्किटेक्चरमा अध्यान गरे ।
२०३७ मा अर्को छात्रवृत्तिमा रिजनल डेभलपमेन्ट प्लानिङमा पि।एचडी गर्न दिल्लीको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा गए । २०४२ सालमा उनले “The Nature of Underdevelopment and Regional Structure of Nepal” विषयमा विद्यावारिधी शोधग्रन्थ पूरा गरेर आफ्नो लामो शैक्षिक यात्रालाई औपचारिक रुपले विराम दिए ।
सप्तरीको मोहन नि.मा.वि.मा यादवले प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि जनता मा.वि.मधुवन र वनदहवाकट्टी हाइस्कूल सप्तरीमा माध्यमिक शिक्षा सम्म अध्यान गरे पछी यादव धरानको हात्तीसार क्याम्पस भर्ना भए । त्यहाँबाट आईएस्सी गरेपछि उहाँले महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरबाट स्नातक र स्नातकोत्तर सम्मको पढाइ गरका छन ।
विश्वप्रकाश शर्मा प्रखर बक्ता र युवा मन भएका नेता हुन् । हालसालै नेपाली कांग्रेसका प्रबक्ता रहेका शर्मा ०४६ सालमा मेची बहुमुखी क्याम्पसका सभापति, नेपाल विद्यार्थी संघको महामन्त्री, अध्यक्ष हुँदै कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए।
नेपाली कांग्रेस पार्टी भित्र युवाले नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर अभियान चलाउने शर्मा कांग्रेस कार्यकर्ताको प्रिय नेता हुन् । शर्माले स्नाकोत्तर सम्मको अध्यन गरेका छन ।
१२.गगन कुमार थापा
नेपाली कांग्रेसका प्रखर वक्ता एवं युवा नेता गगन थापाले दश कक्षा सम्मको पढाइ सिद्धार्थ बनस्थलीबाट गरेका हुन् ।
विद्यालय उमेरमा उनी डाक्टर( इन्जिनियर बन्ने सोंच राखका थिए तर २०४६ सालको आन्दोलनमा सक्रिय भएर लागेपछि उनलाई राजनीतिमा जाने सोच बनाएका हुन् ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा उनि मात्र ९ कक्षामा पढ्दथे । थापाले समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका छन । एक पटक स्वास्थ्य मन्त्रीसम्म बनीसकेका थापाले स्वस्थ क्षेत्रका धेरै कुराहरुमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएका छन् ।
कडा मिजास स्वभाव भएका बामदेव गौतम तत्कालिन नेकपा नेकपा एमाले पार्टीको उपादक्ष्य सम्म रहेका छन । पटक पटक मन्त्री सम्म बनेका गौतमले एस। एल। सी सम्म मात्र पास गरेका छन ।
१४.डा. शसांक कोइराला
नेपाली कांग्रेस पार्टीका महामन्त्री कोइराला आखाका डाक्टर हुन् उनले MBBS र MD गरेका छन । बिपी कोइरालाका छोरा शसांकले पढाइमा जति चर्चा कमाएका छन त्यती राजनीतिमा चर्चा कमाउन सकेका छैनन्। बाबुको लिगेसीले कोइराला कांग्रेस भित्र लोकप्रिय छन ।
राजपाका सयोजक ठाकुरले स्नातक सम्म पास गरेका छन । निकैनै सालिन रुपमा प्रस्तुत हुने ठाकुर कुटनीतिक नेताका रुपमा चिनिन्छन । मधेशी समुदायमा लोकप्रिय रहेका उनी नेपाली, अंग्रेजी, मैथली, हिन्दि आदि भाषामा दक्खल राख्छन ।
एस. एल. सी सम्म मात्र औपचारिक सिक्षा लिएका ज्ञावाली तत्कालिन नेकपा एमाले पार्टीको सचिव सम्म भएका छन । नेपालका बौदिक नेताहरुमा पर्ने ज्ञावालीलाइ इतिहास, दर्शन, समाजशास्त्र र अर्थशास्त्रमा गहिरो ज्ञान राख्छन । उनले पंचायती शासनको बेलामा स्वाअध्यनमा बिताएका थिए ।
भारतको जवारलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा दर्शन र अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका गिरि निकै नै अध्यनशिल वक्ति र राम्रा लेखक लेखाक पनि हुन् । बनारसमा रहदा साहितिक पत्रिकाको प्रकाशन गर्दै गर्दा राजनीति प्रति चाख जागेको कारण राजनीतिमा होमिएका थिए । उनि संग प्रजातान्त्रिक धारको मात्र हैन बामपन्थी थारको पनि गहिरो ज्ञान छ ।
नेपालका महिला नेत्रीहरुको अग्र स्थानमा पर्ने भुसालले स्नातक सम्म अध्यान गरेकी छिन। तत्कालिन नेकपा (माओवादी) पार्टीको पुर्व प्रबक्ता र पुर्वमन्त्री सम्म हुन । उनि राजनीति र संगठनमा निकै नै दक्खल राखने सक्ने नेत्रीको रुपमा लिइन्छ ।
१९. योगेस भट्टराई
विद्यार्थी राजनीतिबाट राजनीतिमा आएका भट्टराईले समाजशास्त्र र मानवशास्त्र विषयमा एमए उत्तीर्ण गरेका छन। नेता भट्टराईले स्कूल पढ्ने बेला झापा विद्रोहको समय थियो । उनि भखर्रै सरकारका सास्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बनेका छन् ।
ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लामा यसको प्रभाव परेकाले उनलाई पनि स्कूल पढ्ने समयमै बामपन्थी राजनीतिप्रति झुकाव बढ्यो र राजनीतिमा सक्रिय भएर लाग्न थाले। भट्टराई नेकपा एमालेको सचिव जस्तो पदमा समेत काम गरेका छन। निक्कै अध्यनशील र सामुहिक राजनीतिमा बिस्वास राख्ने भट्टराई युवा पुस्ताले मन पराएका नेता हुन् ।
२०. जनार्दन शर्मा
खरो स्वाभाव र परिणाममुखी काम गर्ने नेर्ता जनार्दन शर्माले उर्जा मन्त्री हुँदा चलाएको उज्यालो अभियान निकै नै चर्चित र सफल अभिनय हो । नेपालमा लोडसेडिङ हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका शर्मा पूर्व माओवादी सेनाका डेप्यूटी कमान्डर पनि थिए । शिक्षा शास्त्रमा स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका शर्मा हक्की स्वभावका रहेका छन ।
बरामद बन्दुकबाट गोली नचलेको पुष्टि, थप अनुसन्धान जारी
नेपालमै आएर नेपालीलमाथि एसएसबीको अत्याचार